Maxaa ka dhaxli karna Fikirka uu xambaarsan yahay Buuga Abiye
Haduu hirgalo Fikirka uu xambaarsan yahay Buuga Abiye Axmed ee Medmer maxay kafaaiidi karaan maxayse ku waayi karaan Deegaanka Soomaalidu?
Walaallayaal si aad u fahantaan jawaabta su’aashan intaanan ka jawaabi waxaan inyar idiin faahfaahin sadexda nadaam ee Faderaal ee Aduunka maanta ka jira ku waa soo kale ah:
1- Ka koobaad waa Federaal qoomiyadu ku dhisan state walbana maamulkiisa u madax banaan yahay oo Dowlada Dhexana kuraasteeda iyo shaqaalaheeda lawadaago (Ethnicity based provinces or states of federation under shared federal government’s power).
Midkan lama doorankaro, waxna madoorankaro, shaqo dowladeedna kama qabankaro mawaadiniinta wadankaas ee aan Qoomiyada dhulkaas leh dhiig ahaan u dhalanin xataa haday ku dhexdhasheen.
Waana kan hada Itoobiya kajira waloow aan siduu yahay ilaaxad hada loo hirgalini oo Axmaaro shaqooyinkii umadeenna haysato. Federaalkani wuxuu horayna ooga jirijirsy dalkii Yuguslaafiya. Federaalka noocani ah wuxuu dan u yahay Qoomiyadaha laga tirada badan yahay ama laheysto sida Deegaanka Soomaalida oo kale. Oo waxay qoomiyaduhu iskaga difaacaan Qoomiyada haysata ama ka tirro badan.
2- Kan labaad waa Federaal ku dhisan Dhul cidaydoonto hadagtee-Dowlad Deegaan dhuleed. (Geographical based federetion of provinces or states sharing federal government’s powers.
Federaalka noocan ah wadanku wuxuu u qeybsan yahay Gobolo ama Stateyo oo xuquuqda lagu qeybsadaa mawaadin walbana, qoomiyadana ma kalalaha, xaq wuxuu u leeyahay inuu meeshuu rabo dago waxna ka doorto lagana doort.
Waana ka kajira Maraykanka iyo wadamo badan oo kale. Federaalka noocan ahai wuxuu khatar ku yahay Qoomiyadaha laga tirada badan yahay ama lahaysto oo dadkii katirada badnaa amaba haystay ayaa ka qaalib noqoni dadkii dhulkaas dhiig ahaan u dhashay, dhaqan ahaan iyo Diin ahaanba muddo kadib waxay ku milmi ooy lamid noqoni ku haysta.
3- Federalka nooca Sedexaad waa mid Diin amaba Madhabo ku dhisan oo Diin lagu qeybsado awooda ama kuraasta Dowlada. Waana midka kajira hadda wadanka Lubnaan. Oo waxaa awooda loo qeybiyaa Sunni, Shiico iyo Kirishtaankan. Federaalka noocan ahi wuxuu ilaalliyaa ama difacaa xuuquuqaha dadka kala Diimaha amaba Madaahiibta ah ah.
Walaalayaal Fikirka Buugu xambaarsan yahay waa in dhulka iyo xukunba lawadaago oo hal xisbi oo weyni ka taliy Itoobiya, nooca Federaalka Qoomiyada ku dhisana loo badalo mid dhul aan lakala lahayn ku dhisan ee aan idiinku sharaxay Qodobka labaad( 2)
Federaalka Deegaanka Soomaalidu haysto hada waa kan koobaad ee kor ku faahfaahiyey oo aan dhameyd tirayn waana midka danta u ah intay Itoobiya ku hoos jiraan ee ay xooga ku haysato ee ilaahay farad kale ooga furayo.
Walaalayaal idinkoo kan koobaad hayta ayaa shaqaalihii Deegaanka Soomaalida 30% shaqooyinkiinii si sharci darro iyo Xoog ah Qoomiyadaha kale Itoobiya idiinka haystaan oo wiilashiinii Jaamacadaha ka qalin jabiyey shaqo la’aan u soo tahriibaan oo Magafe ku qashaa Liibya. Shaqaalihii Wasaaradaha heer Federaalka ee Deegaankiina ka shaqeeya hal ruux kuma lihidiin sida: War isgaadhsiinta, Boostada, Bangiyada, Eriboodhyada iyo Jibriyadda Iwm.
Political powerkii Federaalkana waxba kuma lihidin, iska daa wax kalee xataa Askarta militariga Itoobiya kamid ma tihidiin oo leydiinma ogola oo kiiwii Dagaalkii Itoobiya iyo Eretariya wiilashii lagu daray intii Baadha ka soo badbaaday waakii la soo ruqseeyey intii Soomaalida ahayd 2004tii.
Kan hada Buuga Medhemer iyo Abiye Axmed soo wadaan waa federaalka nooca labaad ah. Qiimayntaydana khatar ka weyn hada kahor ma soomarin Deegaanka Soomaalida. Tusaale Itoobiya dadkiibaa kabatay haday labaatan malyan oo itoobiyaana Soodagaan Deegaanka Soomaalida oo ay xaq u yeeshaan innay wax doortaan lana doorto, shaqo walbana qabankaraan sharci ahaan, isla markaana ay taageero ka helayaan Xukuumada Adhis Abbaba iyo Milatariga Itoobiya waxaad halkaas ka garankartaa in ladhi Deegaankan Waabay Soomaali lahaan jirtay. Waxaa Abiye Axmed, Medhemer iyo Axmaaro soo wadaana waa uun inay dhulka Soomaalida la wareegaan.
Tusaale kale hadii Fikirkan Medhemer Hirgalo miyeynu haysanaa 20 malyan oo qof oo Soomaali ah oo Oromo iyo Axmaaro inoo dhexdaga? Waa maya Iyagu wey haystaan.
Xogtaan hayana fikirkan Medhemer Qoomiya dhulkeeda lagu xalaaleysanayo ee Abiye Axmed iyo Axmaaro ku socdaan waa tan Soomaalida iyo Dhulkeeda Shidaalka laga helay. Idinku Soomaaliyeey wixii aad kala sad bursataan reer Soomaaliyeed unbaa ka bariisayni waadna ku wada qayileysaan lkn tan soocota hadii leydin mariyo Axmaaro iyo Oromaa ka canjeeraysan wadankiina. Waadna ogtihiin inayna xataa WAR MAANTA QAAD II QAAD DHAQANKÒODA KUJIRIN KAANABA YEELEYNIN BAKHEYLNIMO AWGEED.
Hadabba walaalayaal maanta ayaad Fursad haysataan ee ka faaiidaysta oo dhamaantiin masuuliyiinta maamulka DDS iyo xisbiga SDP iyo ONLF-Asmara iyo xisbiyada cusub iyo shacabkuba mayeeleyno MEDHEMER ku midooba leydin kuma qasbi karee!!! Hadii Dhiishiinna Duur laga qorayna u sacabeeya oo qaata Fikirkaas dhulbalaadhsiga Axaarada ku dhisan.
Fadlan sheergaree si dadka Soomaaliyeed u ogaadaan khatarta ku soo socotay Boogan